मकालु हिमालबाट संकलन गरियो ४५ सय के.जी. फोहोर « News24 : Premium News Channel
मकालु हिमालबाट संकलन गरियो ४५ सय के.जी. फोहोर
काठमाडौं । दोस्रो चरणको नयाँ भेरियन्टको कोरोनाविरुद्ध नेपाल लडिरहेको छ । दैनिक सयौँले कोरोनाबाट ज्यान गुमाइरहेका छन् । देशका अधिकांश जिल्लाहरु निषेधाज्ञामा रहेका छन् ।
सरकारले अतिआवश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन निर्देशन दिएको छ । तर, यहीँ महामारीको समयमा वातावरण सफा रहे ज्यान कुशल रहन्छ भन्ने उद्धेश्यका साथ नेपाल आर्मीको समूह, पर्यटन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्ड र विभिन्न संघ संस्थाका व्यक्तिहरु हिमाल सफाइ गरिरहेका छन् ।
‘सफा हिमाल अभियान २०२१’ अन्तर्गत मकालु हिमालबाट हालसम्म ४ हजार ५ सय किलोग्राम (के.जी.) फोहोर संकलन गरिएको छ । सफाई अभियान टोलीका सदस्य छिरिङ जाङ्बु शेर्पाका अनुसार मकालु हिमालको आधार शिविरबाट हालसम्म ४ हजार ५ सय के.जी. फोहोर संकलन गरिसकिएको छ ।
उनले न्यूज २४ नेपाललाई भने, ‘विभिन्न संघसंस्थाको साथमा नेपाल आर्मीले हाल सफाई अभियान चलाइरहेको छ । साथै, हाम्रो अभियान सफलताको नजिकै रहेको सम्पूर्णलाई जनाकरी गराउन चाहन्छु । हाम्रो लक्ष्य पाँच हजार किलोग्राम फोहोर संकलन गर्ने रहेको छ भने अहिलेसम्म हाम्रो टोलीले ४ हजार ५ सय सय किलोग्राम फोहोर जम्मा गरिसकेको छौं ।’
उनका अनुसार अब केही दिनमै ५ हजार केजी फोहोर जम्मा गर्न सफल हुनेछौँ । हाल जम्मा भइरहेको फोहोर मकालु हिमालको आधार शिविरअन्तर्गत पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, र चौँथो क्याम्पबाट जम्मा गरिएको छ ।
फोहो संकलनका क्रममा जल्ने फोहोर उतै व्यवस्थापन गरिएको र नजल्ने फोहोर काठमाडौं ल्याउने योजना रहेको पनि शेर्पाले बताए।
हिमाल सफाइअघि सगरमाथा, ल्होत्से, मकालु, धौलागिरी, पुमोरी र आमादम्बलम गरि ६ वटा हिमालमा सरसफाइ गर्न लगाएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता समेत रहेका सहायक रथी सन्तोष बल्लभ पौडेलले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएका थिए। उनका अनुसार ६ वटै हिमालको बेस क्याम्प भन्दा माथिबाट मात्र १८ टन फोहोर ल्याउन लागिएको छ ।
अहिले चलिरहेको अभियान तेस्रो चरणको अभियान हो । यो अभियान चैत २१ देखि जेठ २२ सम्म ३१ दिन सरसफाइ अभियान चलाइनेछ ।
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार जम्माजम्मी ८४ दिन चल्ने यो अभियानमा तालीमप्राप्त ४० सैनीक सफाइ अभियानमा परिचालन गरिएको छ । त्यस्तै, उनीहरुलाई सहयोग गर्नका लागि ६९ जना हिमाली आरोही शेर्पा परिचालन गरिएको छ ।
यस अभियानमा १२ करोड ५० लाख खर्च हुने अनुमानसहित बजेट छुट्याइएको छ । जसमा १० करोड बजेट वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको हो भने २ करोड ५० लाख नेपाली सेनाले खर्च गर्न लागेको हो ।